Jose Mourinho oo doonaya in uu sii joogo Manchester United - BBC Somali
Jose Mourinho oo doonaya in uu sii joogo Manchester United
Image caption Manchester United ayaa badisay saddex-dii ciyaarood ee u dambeeyay ee Horyaaalka Ingiriiska
Tabobaraha kooxda Manchester United, Jose Mourinho ayaa sheegay in uu doonayo in uu kooxda sii joogo wakhti ka badan qandaraaskiisa hadda oo saddex sano ah, sababtuna ay tahay in uu jeclaysanayo wakhtiga uu ku qaadanayo garoonka Old Trafford.
Mourinho oo 53 jir ah ayaa kooxda ku soo biiray bishii todobaad ee sanadkan, kaalinta lixaad ayayna kaga jiraan horyaalka Ingiriiska ee Premier League ka dib 17 ciyaarood oo ay dheeleen.
Bishii tobnaaad ayuu sheegay "in ay xoogaa masiibo tahay" in hotel lagu noolaado, United-na waxay la daalaa dhacaysay in ay si wanaagsan isula jaanqaado wixii ka horeeyay ciyaarihii u dambeeyay oo ay natiijooyin keeneen.
Mourinho ayaa sheegay in uusan u wareegaynin Shiinaha inkastoo uu qiray in "lacagta Shiinuhu ay qofkaste soo jiidanayso"
Ciyaaryahanka khadka dhexe uga dheela Chelsea ee Oscar ayaa lala xiriiriyay in uu u wareegayo kooxda Shanghai SIPG, eek a dhisan dalka Shiinaha halkaas oo laga yaabo in uu todobaaad kaste ka qaato 400,000 oo gini.
Wuxuu sheegay in uu doonayo in uu joogo meesha oogu adag si uu u guulaysto.
Waraysi uu siiyay Sky Sports, ayuu Mourinho ku sheegay in uu aad oogu faraxsan yahay ciyaaryahannadiisu in ay sidan sii ahaadaan marka la gaaro suuqa kala iibsiga, uuna ka xunyahay in uusan qaar ka mid ah ciyaaryahannada siinin fursado ay ugu saftaan kooxda.
Wuxuu intaas ku daray in uu dareemayo in uu nin xun yahay maadaama oo uusan ciyaaryahan kaste siinin jaanis dhab ah.
Wuxuuna si gaar ah magacyadooda tusaale ugu soo qaatay Ashley Young iyo Memphis Depay.